Filimside.net | Author Archives
Home » Entries posted by Super Admin
Atariishada weyn Kajol 25 sanno ayey fanka ku jirtay, mase rumeysan doontid inta jeer ee ay baajisay duubis filim!
Posted on December 3, 2017 by Super Admin and saved under Bollywood News, Wararka Maanta
Kajol ayaa dhammeysatay 25 sanno oo ay ku jirtay fanka India, waana mid ka mid ah atariishooyinka sida weyn loo qiimeeyo ee Bollywood Town. Kajol ayaa sannadkii 1992dii waxay Bollywood-ka kusoo gashay filimkii Bekhudi, inkastoo uusan filimkaasi wacdaro ka dhigin Box Office-ka hadana wixii intaas ka dambeeyey xirfaddeedu sarre ayey…
LA OGAA: Kareena Kapoor kaarto cajiib ah ayey degtay si aysan Shahid Kapoor ugula kulmin xafladdii Filmfare Glamour & Style Awards!
Posted on December 3, 2017 by Super Admin and saved under Bollywood News, Nolosha Jilaayaasha, Wararka Maanta
Xiddigaha magaca sarre ku sameystay Bollywood ayaa isugu yimid xafladdii heerka sarre aheyd ee Filmfare Glamour & Style Awards 2017, halkaas waxaa ku kulmay wajiyo caan ah. Xitaa shimbirihii hore ee jaceylka Kareena Kapoor iyo Shahid Kapoor ayaa ka mid ahaa dadkii goobta lagu casuumay. Laakiin hogaamiyeyaasha filimka Udta Punjab…
Comments Off on LA OGAA: Kareena Kapoor kaarto cajiib ah ayey degtay si aysan Shahid Kapoor ugula kulmin xafladdii Filmfare Glamour & Style Awards! / Continue reading →
Akshay oo aan Box Office-ka kula dagaalami doonin Akshay bisha April ee sannadka dambe
Ka dib markii filimsameeye R. Balki uu xaqiijiyey waqtiga la daawan doono filimkiisa Padman, wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan inuu Box Office-ka India heli doono tartan u dhexeeya Akshay Kumar vs Akshay Kumar ayaa sarre u kacay. Maxaa yeelay Akshay Kumar ayaa wuxuu door hogaan ah ku leeyahay…
Comments Off on Akshay oo aan Box Office-ka kula dagaalami doonin Akshay bisha April ee sannadka dambe / Continue reading →
Ka dib filimkii Ittefaq, Filimsameeye Karan Johar oo markale la shaqeyn doona Sonakshi Sinha
Filimsameeye Karan Johar ayaa wuxuu daaha ka qaaday inuu labada Isbuuc ee soo aadan ku dhawaaqi doono filim ay hogaamiye ka tahay atariishada caanka ah Sonakshi Sinha. Karan Johar iyo Sonakshi Sinha ayaana markale isla shaqeyn doona ka dib filimkoodii ugu dambeeyey ee Ittefaq kaasoo uu Director ka ahaa Abhay…
Comments Off on Ka dib filimkii Ittefaq, Filimsameeye Karan Johar oo markale la shaqeyn doona Sonakshi Sinha / Continue reading →
Akshay Kumar iyo Salman Khan marka magacyadooda si wadajir ah loo soo hadal qaado taageere walba oo Bollywood ah waxaa maankiisa kusoo dhici jirtay inay saaxiibo wanaagsan yihiin. Balse haatan warbaahinta India ayaa sheegeysa inuu meesha ka baxay xiriirkii saaxiibnimo ee ka dhexeeyey Akshay Kumar iyo Salman Khan. Xitaa Salman…
Fannaan u dhashay Australia oo dhacay maqaayad xeebta ku taalla, balse qaabka uu u dhacay ayaa ilqabad leh!
Posted on December 3, 2017 by Super Admin and saved under Arimaha Bulshada, Wararka Maanta
Fannaan qaada heesta raabka ah oo u dhashay dalka Australia laguna naaneyso 2Pec ayaa wuxuu maqaayadda xeebta ku taalla ee Omeros Bros Restaurant kala baxday biil dhan 600 oo dollars. Ninkaan ayaa wuxuu maqaayaddaan ku taalla xeebta ka dalbaday raashin qaali ah, markii uu dhammeystay raashinkaasna badda ayuu isku tuuray…
Comments Off on Fannaan u dhashay Australia oo dhacay maqaayad xeebta ku taalla, balse qaabka uu u dhacay ayaa ilqabad leh! / Continue reading →
LA YAAB: Eey sabab u noqday inay isdilaan wiil iyo aabihiis (Sheeko xanuun badan)
Wiil 22 sanno jir ah ayaa wuxuu gobolka Chicago ee dalka Mareykanka ku dilay aabihiis oo 43 sanno jir ah – ka dib markii ay labadoodu ku murmeen cidda subaxdaas wadan doonta eeyga guriga, sida ay boliisku daaha ka qaadeen. Murankii u dhexeeyey aabahaan iyo wiilkiisa ayaa wuxuu gaaray in…
Comments Off on LA YAAB: Eey sabab u noqday inay isdilaan wiil iyo aabihiis (Sheeko xanuun badan) / Continue reading →
FASAX MISE GUUR: Halkee ayey aadeen Virat Kohli iyo Anushka Sharma, xantuse maxay sheegaysaa?
Hadalheynta xiriirka jaceyl ee ka dhexeeya Virat Kohli oo ah ciyaaryahan ciyaara Cricket iyo atariishada Bollywood Anushka Sharma ayaa muddo dheer socotay. Xaqiiqaduse waxay tahay in Virat Kohli iyo Anushka Sharma aysan la gamban dareenkooda jaceyl, iyagoo marwalba gacmaha isheysta ayeyna saxaafaddu aragtaa. Virat iyo Anushka xitaa waxaa jira magac…
Comments Off on FASAX MISE GUUR: Halkee ayey aadeen Virat Kohli iyo Anushka Sharma, xantuse maxay sheegaysaa? / Continue reading →
SALMAN KHAN: “Katrina Kaif qoobka-ciyaarka waa ay kaga wanaagsan tahay Deepika Padukone iyo Priyanka Chopra”
Posted on December 2, 2017 by Super Admin and saved under Nolosha Jilaayaasha, Wararka Maanta
Salman Khan iyo Katrina Kaif waa laba shaqsi oo isku soo baxa ha jillaan filim ama howl bannaanka ka ah aflaanta. Salman ayaana dabeecad ka dhigtay inuu marwalba ammaano Katrina. Salman ayaa wuxuu haatan gees kale ka ammaanay xirfad jilliinka Katrina, wuxuuna sheegay inay ka mid tahay atariishooyinka ugu wanaagsan…
Salman Khan iyo Priyanka Chopra oo kasoo muuqday liiska 500 hogaamiye ee ugu saameynta badan dhanka ganacsiga
Salman Khan iyo Priyanka Chopra ayaa kasoo muuqday liiska 500ta boqol ee shaqsi ee ugu saameynta badan marka ay timaado hogaamiyeyaasha ganacsiga ee shabakadda Variety (influential business leaders). Majaladda Isbuuclaha ah ee kasoo baxda dalka Mareykanka Variety ayaa qiimeyntaan ku sameysay ganacsato adduunka dacalladiisa ah, kuwaasoo qiimaha lacageed ee ay…